ဟင်းချက်အတွက် ... | အလုံးစုံတို့အဘို့အသုံးဝင်သောသတင်းအချက်အလက်များ
အမျိုးအစား: ထဲမှာဟင်းချက် ...
ငါနှင့်ပုံမှန်အတိုင်းနှင့်တကွ, ပေါင်မုန့်စက်အတွက်ပေါင်မုန့်အခြောက်အမရတဆေးကိုမဖုတ်နိုင်သလား? ဘယ်လိုအသုတ် upload သလော ဖြစ်နိုင်သမျှသာပေမယ့်မလိုအပ်ပါဘူး။ ငါအောက်ပါစာရွက်, အင်တာနက်ကနေ stibrennym ကိုအသုံးပြုပါ။ ...
ဘယ်လိုတစ်နာရီအကြောင်းကိုအလွယ်ကူဆုံးကြက်သားဟင်းချိုကွတ်ကြက်သားစေ။ အခါအားလျော်စွာရှင်းလင်းပြတ်သားတဲ့ဟင်းရည်ပေးကြဖို့ရေမြှုပ်ဖယ်ရှားလိုက်ပါ။ ကြက်သား Remove, disassemble (သီးခြားစီအရိုး, သီးခြားစီအသား) ။ အသားခုတ်။ ကြော် 1 ...
ဘယ်လိုကင် pollack နှင့်မည်မျှအချိန်ရုံချပ်သို့ဖြတ်, သန့်ရှင်းရေးလုပ်ဖို့, ထောပတ်နှင့်အတူတစ်ဦး skillet အတွက်မုန့်ညက်နဲ့ကြော်အတွက်လိပ်ရန်။ ကောင်းပြီနှင့်ဆား။ ငါဒါပါဘူး: စင်ကြယ်သောအပိုငျးပိုငျး .Posolila သို့ဖြတ် ...
တစ်ပေါင်မုန့်ကင်ရာမီးဖိုကလေးမပါဘဲကင်လုပ်ဖို့ဘယ်လို? တိုင်းအသေးစိတ်ကြီးမြတ်ရှိကြောင်းသံတမန်နည်း :) စေရန်မည်ကဲ့သို့ဖော်ပြထားရှိရာဆောင်းပါးတစ်ပုဒ်) http://expert-byt.ru/kak-sdelat-tosty-bez-tostera/ တွေ့ရှိခဲ့🙂တစ်ခုသာစင်ကြယ်သောအိုးလိုအပ်ပါတယ်။ မီးပေါ်မှာထားပြီးလျှင်, သငျသညျ hlebushek ကထား ...
မေးခွန်းခွက်ထဲမှာဂရမ်ဘယ်လောက်ရှိလဲ။ ငါထင်သည်မှာခွက်တစ်ခုလုံးသည် 200gr ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဤ "ဒီကုဒ်ဒါ" ကိုအမြဲတမ်းအသုံးပြုသည်။
prompt ပြုတ်အာလူးရိုးရှင်းသောသုပ် retseptik ??? နှိပ်စက်ခြင်းကိုခံရအာလူးပြုတ်, ဟင်းရွက်ဆီလောင်းခြင်းနှင့်ရောထွေး, အန်စာတုံး Pickled ထည့်ပါ။ တစ်ပန်းကန်ပေါ်လိပ်ကိုတင်လတ်ဆတ်တဲ့သခွားသီး၏ချပ်နှင့်အတူ Mayonnaise နှင့်အပါအနှင့်အတူပျံ့နှံ့ ...
ဘယ်လောက်ခေါက်ဆွဲကိုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ဖြောင့်မယ်ဆိုတာကို“ အဆင်သင့်မဖြစ်မှီ” ပြောရန်မလိုအပ်ပါ။ ကအထုပ်အပေါ်ရေးသားထားသောမဟုတ်ပါဘူး
ဘယ်လောက်ခေါက်ဆွဲကိုချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လောက်ဘယ်လောက်ဖြောင့်မယ်ဆိုတာကို“ အဆင်သင့်မဖြစ်မှီ” ပြောဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ၎င်းသည်ပါတနာများပေါ် မူတည်၍ အထုပ်များ၊3မှ 10 မိနစ်များသို့စာရေးသည်မဟုတ်ပါ။
အာလူးကင်ဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? မည်သည့်ကိစ္စတွင်နေကြာရေနံနှင့်မကြီးများ၏အရေအတွက်နှင့်အတူအဖုံးကိုပိတ်လိုက်မဟုတ်ပါဘူး။ တိတ်တဆိတ်နဲ့လျင်မြန်စွာ)) အမဲသားကိုပြီးတော့ထိပ်ပေါ်မှာ, ပထမ, ဟုတ်ကဲ့ ... ကြော်အာလူးမှာသလိုပဲဒါကြောင့် ...
အဘယ်အရာကိုသောက်သည်အအေးမိထံမှကွဲပြားခြားနားပါသလဲ အပူချိန်နှင့်ကြာချိန်🙂ကွဲပြားခြားနားသောအပူချိန်အခြေအနေများအောက်တွင်အသား bloating: အအေးမိဆေးလိပ်သောက် 1820S; ပူပြင်းတဲ့ဆေးလိပ်သောက် 3550S; မီးခိုး၌ဖုတ် 70120S ။ အဓိကအားဖြင့်ပထမဦးဆုံးအသုံးပြုသော ...
တစ်ဦး Blender အတွက်အချိုပွဲဒိန်ခဲ, ငါသည် 200gr retseptik ပြောပြနှင်တံ။ ထောပတ် 0,5% နို့ (ဂ။ 150) နှင့်ပုံးချောကလက်ပရိုတိန်း၏တစ်စုံယူသွား။ ဒါဟာအိပ်ရာမသွားမီတဲ့သရေစာအဘို့ကြီးစွာသောအနိမ့်ကယ်လိုရီပရိုတိန်းကော့တေးလှည့ ...
သံချေးရှိမရှိ? ဝယ်မနေ့ကအိုးကင်း, ချက်ပြုတ် pilaf ။ အခုတော့သံချေး၏နံရံပေါ်မှာ။ ဒါဟာသံအိုးကင်းများအတွက်ပုံမှန်ဖြစ်သနည်း သတ္တုပြင်ဆင်မှုနည်းပညာ၏ချိုးဖောက်မှုတစ်စကေးရှိခဲ့လျှင်ဘာမှကူညီပေးပါမည်။ ကျနော်တို့ရှောက်သွားဖို့ကြိုးစားရမယ် ...
အဆိုပါမိုက်ခရိုဝေ့ထဲမှာအရသာမီးဖုတ်ထားသောအာလူးပြောကြပါတယ်။ မည်သို့ဖြစ်စေ? ယခုငါတို့ရှည်လျားရှိသည်မဟုတ်ကြဘူး။ ကျနော်တို့ကင်နဲ့မီးဖိုရှိသည်။ ။ အီး။ အဆိုပါ combi mode ကို t ကိုအပေါ် ထား. , မိုက်ခရိုဝေ့ (နဲ့အတူရပါမည် ...
ဥဘယ်လောက်ကြာကြာချက်ပြုတ်ဖို့လိုသလဲ ???? တစ် ဦး တွန့်တွန့်၌ငါသူတို့ကိုရေနွေးအိုးထဲသို့သွင်းပါကသူတို့ကိုဆူပွက်နေချိန်မှာသူတို့ကအားလုံး 10 min ချက်ပြုတ် - ခက်ခဲ - ပြုတ်သင်ဖြစ်ကောင်းတစ် ဦး အစပြုသူလူပျိုဖြစ်)) ။ ယေဘုယျအားဖြင့်မာကြော။ ...
ပြည်သူ့! အဘယ်သူသည် Pickled နှင့်အတူ pies များအတွက်စာရွက်ရှိသနည်း ကြှနျုပျတို့နှငျ့အတူဝေမျှပေးပါ! Pickled ရန် post ကို pies အတွက်ချက်ပြုတ်သည်သူ၏တစ်သက်တာကာလအတွင်းငါ့အဖွား: မုန့်စိမ်းလာမယ့်ခဲ့သည်အထိပိန်ကြုံသောတဆေးသည်မုန့်စိမ်းကိုတင် ...
မည်သို့စုံတွဲတစ်တွဲကိုမနာမည်တစ်ခုမီးသင်္ဘောများအတွက်ငါးချက်ပြုတ်ဖို့ ?? အိုးတလုံးကို ယူ. ထဲသို့ရေအနည်းငယ်လောင်းရှိတယ်, ရေအနည်းငယ်လောင်းနှင့် drushlag အပေါ်ငယ်လေးတစ်ပြီနောက်ဟင်းထားသေးငယ်ဒယ်အိုးအတွင်းပိုင်းကိုထား ...
အိမ်မှာ pheasant အတွက်အမြန်စာရွက်တစ်စောင်အကြံပြုခိုင်း။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် "Bohemian Pheasant" စာရွက်အတွက်လိုအပ်သည်မှာ - Pheasant - 1 pcs ။ - အဆီ - 50g - ဆီသို့မဟုတ်အဆီ ...
မည်သို့မှစနစ်တကျနှင့်အရသာဘီစကွတ်မီးဖို၌ထွက်ခန်းခြောက်ကပ်? ရှေ့ဆက် Pomazhte posypte ထောပတ်နှင့်ဆား, ငရုတ်ကောင်းနှင့်ကြက်သွန်ဖြူညှစ်ရိုးရိုးသားသားဖြစ်, ငါတကယ် croutons နှင့်အတူနှောငျ့ယှကျဘယ်တော့မှမရှိကြပေ။ ငါဖြတ် ...
ဘယ်လိုအကြေးခွံမှငါးရှင်းလင်းဖို့အားလုံးကိုမီးဖိုချောင်ကျော်ဖြန့်ကြဲသည်မဟုတ်လော ဒါကြောင့်ယခင်ကရှာလကာရည်နှင့်အတူကိုင်ထဲမှာရေပူသို့မဟုတ်အအေးကိုရေ၌နှစ်ပြီးသောလျှင်ငါးရှင်းလင်းဖို့အများကြီးပိုလွယ်သည်။ ပိုကောင်းတဲ့အယပ် ...
ချက်ပြုတ်ဖို့ဘယ်လို multivarka အတွက်မှိုဟင်းချို? ငါ multivarka Redmond မှိုဟင်းချိုချက်ပြုတ်ဖို့ကိုချစ်ဒီစာရွက် http://www.multivarka-vari.com/gotovim-v-multivarke-redmond-gribnoj-sup/ အလင်းနှင့်အရသာဟင်းချိုအပေါ်ကဒီမှာချက်ပြုတ်အလွန်အရသာရှိတဲ့ဖြစ်ပါသည်, နှင့်စာရွက်ရတာမလွယ်ပါ! ...
အဘယ်အရာကို Roach ထံမှချက်ပြုတ်ဖို့? roach ပါဝင်ပစ္စည်းများ၏ chips: မည်သည့်အရေအတွက်ထဲမှာ Roach, မုန့်ညက်, အရသာအတွက်ဆား, ဟင်းရွက်ဆီ, ကြက်ဥ။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးဟင်းလျာများတစ်ခုမှာ။ ထို့ကြောင့်ပြင်ဆင်ထား roaches စားနိုင် ...